Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere WhatsApp Voicemail Scam - Ndị ọkachamara site na ọkachamara n'ọkụ
Ndị ọrụ Intaneti nwere ọtụtụ ihe hacking ma ọ bụ nyocha. Otu ọgụ malware bụ ozi mkpuchi ozi WhatsApp. Enwere ozi na-ekwu na ịnwe ozi olu sitere na WhatsApp. Email ahụ na-enyo enyo n'ihi na ọ nwere njirimara nke malware ojoro. Email na-elekwasị anya na ndị ọrụ nke WhatsApp na ozi-e. Email ahụ nwere bọtịnụ "Play". A na-agwa ndị ọrụ ịntanetị ka ha gee ntị na ozi olu ahụ site na ịpị bọtịnụ "Play". Mgbe onye ọrụ pịa bọtịnụ "Play" ahụ, ọ na-eduzi ya na ebe nrụọrụ weebụ ọjọọ. Ivan Konovalov, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ọrụ, na-emepụta na nzube nke usoro ihe a bụ ịghọgbu onye ọrụ ịntanetị n'ịbudata malware. Malịa na-emetụta arụmọrụ nke kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka nke ndị ọrụ ịntanetị.
Ntanetị weebụ nwere mgbagwoju anya n'ihi na a na-ebudata malware ndị a na-ebudatara site na ngwaọrụ eji eji nweta ịntanetị. Ndị ọrụ na-enweta ọrụ ịntanetị na-eji smartphones ga-enweta malware dị iche iche site na ndị ọrụ nwere mbadamba nkume, laptọọpụ, ma ọ bụ desktọọpụ.
Ndị ọrụ ndị nwere ike ịghọ ihe ojoo nje malware na-eji usoro sistemụ Google Android. Nchọgharị ozi olu nke WhatsApp na-eduzi ndị ọrụ ịntanetị iji pịa njikọ intaneti..Mgbe a na-ejikọ njikọ ahụ, a na-ebudata faịlụ a maara dịka "Nchọgharị 6.5". Echichi ahụ na-amalite mgbe onye ọrụ pịa bọtịnụ "Kwekọrịta" nke na-egosi na ihuenyo nke ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ ngwaọrụ kọmputa. Oria ojoo na-eziga ozi ederede na ọnụ ọgụgụ ekwentị ọnụego nke ndị ọrụ. A na-ebubo ha ebubo maka ọrụ ọ bụla a na-enye mgbe ị na-ezipụ ozi ederede. The ojoro ojoro na-aga n'ihu mgbe echichi nke "Nchọgharị 6.5." Nke a bụ n'ihi na ndị ọgba ọsọ na-agbalị ịmeghe malware n'ime ngwaọrụ nke ndị ọrụ ịntanetị.
Ịntanetị hackers nwekwara mmasị na jailbroken iphone ngwaọrụ. Ngwaọrụ ndị a na-eme ka ihe dị mfe nke ọrụ ịntanetị dịkwuo mfe n'ihi na ha nwere ike iji wụnye ngwa ndị na-enweghị ike ịbanye na Ụlọ Ahịa Apple App. The internet ọrụ ndị na-abụghị jailbroken iPhones na-echebe site malware ojoro. Nchebe bụ n'ihi na ndị na-abụghị jailbroken iPhone ngwaọrụ na-enye aka na-adaba adaba megide mgbalị hacking.
Ndị ọrụ nke Apple desktọọpụ ngwaọrụ ugbu a na-eduzi na saịtị weebụ na-egosi na ihe omume malware adịghị dakọtara na Apple os. A na-echebe ndị ọrụ nke mobile Apple, laptọọpụ, na desktọọpụ site na nje ojoo. Otú ọ dị, ọ ka dị mkpa ka ndị ọrụ ịntanetị ghara ịpị bọtịnụ "Play" ma ọ bụ "Kwekọrịta." A ghaghị iji nlezianya ọzọ weere n'ihi na ị na-agba mbọ na iji ngwaọrụ mkpanaaka na-aga n'ihu ịzụlite n'ihi ọganihu na teknụzụ ngwanrọ. E nwere nkwa zuru ezu na mgbalị ndị hacking n'ọdịnihu ga-esikwu ike iji kwụsị ngwaọrụ ịntanetị ndị ọzọ na-adịghị emetụta nsogbu ojoo.
Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịntanetị emetụtala ozi mkpuchi WhatsApp. A na - agba ndị na - eme ihe ojoo ahụ nsogbu ume ịkọrọ ndị ọzọ ozi email na ndị ọrụ WhatsApp. Nkọwapụta ozi kwesịrị ekwesị n'etiti ndị ọrụ ịntanetị dị mkpa iji gbochie ntanetị ntanetị nke sitere na hacking ma ọ bụ ọgụ malware Source .